Ukudla Bormenthal ngetafula, mahhala. Luthisa isisindo sikaDkt. Bormental, ukudla
Ezemidlalo Ukudla Ukulahlekelwa isisindo
Ukudla kukaDkt. Bormental: ngokuqinile nangempumelelo
I-Bormental name yokudla ibhekwa njengenye yezidlo ezinzima kakhulu futhi ezisheshayo. Akuyona ihlaya, ukusetshenziswa kwansuku zonke okungaphezulu kuka-1100 kcal. Kodwa kulokho ozoya khona ngenxa yesithombe esiphelele. Ukudla kukaDkt. Bormental, naphezu kwekhalori ephansi, akunayo imikhawulo emikhiqizweni. Okusho ukuthi, ungadla ikhukhi, ucezu lwekhekhe noma i-patty, into eyinhloko ukungena kumuntu ophelele we-1100 kcal.
Kubonakala sengathi uhlelo lwamandla luyinto elula, kodwa kunama-nuances amaningi. Sizoxoxa ngazo ngokuqhubekayo ...
Izici kanye nezimiso zokudla kwe-Bormental
Indlela yokususa umphumela we "plateau"
Isici esiyinhloko sokudla okuphansi kwekhalori, egaxa ekunciphiseni isisindo, ingumphumela ophikisanayo we "plateau", isikhathi lapho isisindo singanciphisi, futhi ngezinye izikhathi sinezela amagremu angu-200. Lokhu kubangelwa ukuvinjelwa okunzima kokudla ezakhiweni zomsoco, imisebenzi yokuzivikela yomzimba ifakiwe ukuvimbela ukuchithwa. Ngamanye amazwi, ngisho nasezikhungweni ze-GIT ze-1100 kcal zithatha ubuningi bezinto ezihlala emaqenjini amafutha.
Ukuhamba kwesikhathi se "plateau" kuya ezinsukwini ezintathu, ngakho-ke ungesabi futhi ungasheshi ukwedlulele, unciphise ukudla ngisho namakholori ambalwa.
Ukususa ukuvinjelwa kwesisindo kuzokusiza ukucindezeleka izinsuku ezincane kwi-kefir kanye namakhukhamba . Udinga ukuwasebenzisa kanye ngesonto.
Ezemidlalo nokudla kwe-Bormental
Ukudla kwe-Bormental kulungile kulabo abangathandi imidlalo. Njengoba ukuzivocavoca okunjalo kunqatshelwe abahlengikazi nabahlengikazi: ikhalori elincane kangaka alondoloze imisebenzi evamile yomzimba. Uma udlala ezemidlalo, isidingo samandla sanda, futhi akukho ndawo ongayithatha, egcwele ukuphazamiseka nokwehliswa kwengqondo.
Njengomthetho, kunconywa ukwenza lula ukufudumala ekuseni ukugcina ithoni ye-muscle. Ngcono nakakhulu - ukuya emizileni yokuzilibazisa kanye ne-physiotherapy sessions. Kodwa uma lo mdlalo ungowesibili "Mina", ukwandise okuqukethwe kwekhalori nsuku zonke ku-1400 kcal.
Izimiso eziyisithupha zokudla kukaDkt. Bormental
Ukulandela imithetho eyisithupha, ukulahlekelwa isisindo sakho ngeke kulethe ukukhathazeka ngokwengqondo nangokomzimba.
Phuza itiye elishisayo emva kokudla okunye. Ukuxuba ama-herbal noma aluhlaza ngaphandle kwama-flavour okufakelwa.
Yenza usuku lokuzila njalo ngesonto.
Hlukanisa ikhalori yansuku zonke ukudla okungama-6-8. Ama-saladi nemifino njengendlela yokudla okuhloswe ngayo ibuye ibhekwe njengesidlo esisodwa.
Yidla amahora 3-4 ngaphambi kokulala. Khona-ke itiye kuphela ngaphandle kweshukela.
Shintsha ukudla okunamafutha amaningi kanye ne-high-calorie nemifino kanye nama-carbohydrate eyinkimbinkimbi.
Njalo bhala phansi okuqukethwe kwekhalori yesidlo esilungisiwe bese ugcina idayari yokudla.
Ukulahlekelwa isisindo ku-Bormental: Indlela yokubala amakholori
Ukudla kudumile ngoba akukho mingcele yokudla kuwo. Kodwa ubunzima ukuthi umkhiqizo ngamunye kufanele ulinganiselwe, bese ubala okuqukethwe kwekhalori kokudla. Ukuguqulwa okungavumelekile okungavumelekile okuvela ku-1100 kcal kuyi-50 kcal kuzo zombili izinkomba. Uma unquma ukunciphisa isisindo ekudleni kokudla, yenza ukubekezela.
Esikhathini sokuqala esikhokhelwayo, uprofesa wokudla okunomsoco ekilasini lokuqala unikeza amakholori wemikhiqizo ye-Bormental, ekhombisa okuqukethwe kwekhalori yemikhiqizo eminingi eyenziwe ngomumo ngamagremu angu-100. Sizokwabelana nawe kuleli tafula mahhala.
Zama ukwenza imenyu ukuze ukudla kwamaprotheni nemifino kuphumelele. Isidlo sakusihlwa nesidlo sakusihlwa kuyoba yingxenye yenkukhu yenkukhu kanye nesaladi eyenziwe utamatisi ovuthiwe kanye nekhukhamba. Futhi uDkt. Bormental awuneluleka kupelepele, usawoti kanye nokudla amanzi nge-sauces, njengoba izinongo zikhuphula ukwanda kwesifiso nokufika ngokushesha kwendlala.
Ukudla okuyisimangalo: amaminithi nokuphikisana
Ukuze uphinde ugcwalise izinombolo ze "Izibopho", udinga ukuphelela ngokuphelele. Kuvinjelwe ukudla ukudla kulabo aba:
Ukuzivikela okunamandla, umlomo wesihlungu somlomo njalo;
Izinkinga ngepheshana lesisu;
Ukuphuza njalo nokuhlukunyezwa kwesisu;
Izifo zesibindi nama-pancreas;
I-asidi yesiphuzo esiswini sinokuphazamiseka;
Ukuphazamiseka kwesizinda se-hormonal;
Ngesikhathi sokukhulelwa kanye ne-lactation;
Ukungasebenzi kwemjikelezo yokuya esikhathini.
Phakathi kwamaminithi, sibona umkhawulo obalulekile ovumelekile we-caloric value, emva kwalokho kuyoba nzima ukubuyela ekudleni okugcwele ngaphandle kokulimaza umzimba. Futhi, kunzima ukuvela lapho kubalwa amandla okudla kwesidlo ngasinye.
Ukudla okune-Bormental, sithole okukodwa kokulahlekelwa kwesisindo esisheshayo.
Ezinye izincomo zokulahlekelwa isisindo ezinhlangothini nasesisu
Ukudla kwe-athomu: kuncike kuma-protein namakhabohydrate
Ukudla okunempilo kokulahlekelwa isisindo: amamenyu, amathiphu nemithetho
Ukudla "Minus 60" ngu-Ekaterina Mirimanova: imenyu nemigomo
I-Pomelo kusiza ukulahlekelwa isisindo
Yini engingayidla ekudleni okungewona ama-carbohydrate?
School Silver Spoon 2016: Usuku lolwazi ngesitayela se-haute couture
Ungathola kanjani okuhle kunoma yisiphi isithombe?
Imizwelo engcolile yomuntu nokukhwabanisa
Yini ewusizo ukwazi uma uya eholidini
Iqoqo le-chocolate libhekene ne-cellulite
Ukudla kweqembu legazi: imikhiqizo enconyiwe kubantu abahlukene
Okufanele ukwenze uma ingane iyeka ukulalela
Ukushintsha umbala wamazinyo
I-sponge ikhekhe ngamafutha
Ukususwa kwamatshe omchamo
Ukuvimbela, colic, ukusikhipha umzimba, ukuzivocavoca
IJam kusuka kuma-apricot (Kiev)
Abazali "cha": ukuphika ingane, ukuqinisa igunya layo